Apple namoaka Safari Technology Preview 132 | Avy amin'ny mac aho
Apple namoaka Safari Technology Preview 132
Safari Technology Preview dia manome topi-maso ireo haitao web ho avy eo amin'ny macOS sy iOS. Raha te ho anisan'ireo voalohany manandrana ireo haitao farany famolavolana, effets visuels, fitaovana enti-mivoatra, sy maro hafa ianao, dia tokony ampidino ity tranokala fanandramana ity. Amin'izao fotoana izao dia vao nanomboka ny orinasa amerikana Safari Technology Preview 132.
Tsy hevitra ratsy ny manandrana an'ity kinova ity satria mifototra amin'ny fanavaozana vaovao ny Safari 15 tafiditra ao amin'ny macOS Monterey ary toy izany dia misy fiasa Safari 15. Marobe ny bara fisolo vava. Izay nohamarinina miaraka amin'ny fanohanan'ny Tab Groups, miaraka amin'ny fanatsarana ny fanitarana ny tranonkala Safari.
ihany koa manana fiasan'ny Live Text izay mamela ny mpampiasa hisafidy sy hifandray amin'ny lahatsoratra amin'ny sary eo amin'ny Internet. Mazava ho azy fa takiana ny kinova beta ‌macOS Monterey‌ sy Mac M1. Misy ihany koa ny fanohanana ny Quick Notes izay manampy anay manampy rohy sy ny fisongadinana Safari izay manampy anay hahatadidy fampahalalana sy hevitra lehibe.
Ny fanavaozana vaovao ny ‌Safari Technology Preview‌ Azo alaina amin'ny macOS Big Sur sy ‌macOS Monterey‌, ny kinova farany an'ny rafitra fiasa Mac navoaka tamin'ity fararano ity. Azo alaina amin'ny alàlan'ny rafitra fanavaozana ny lozisialy. Fantatrao, ao amin'ny System Preferences ho an'ireo izay naka ny browser. Hita ao amin'ny tranokala Safari Technology Preview ireo naoty famoahana feno ho an'ny fanavaozana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » macOS Monterey » Apple namoaka Safari Technology Preview 132
Hetsika Apple, iPhone 13 vaovao ary maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro dia avy amin'ny Mac aho
Apple dia manome fitaovana Marketing vaovao ho an'ny mpamorona